VaMike Pence veRepublican Party Votatsurana naAmai Kamala Harris veDemocratic Party neChitatu Manheru
Senator Kamala Harris naVa Mike Pence
Mutevedzeri wemutungamiri weAmerica, VaMike Pence, vari kutarisirwa nhasi manheru kutatsurana nevari kuda kuzoitwa mutevedzeri wemutungamiri wenyika vakamirira bato reDemocratic Party, Senator Kamala Harris, mudhibheti ravo rekutanga.
Hurongwa uhu hunotevera dhibheti rekutanga svondo rapera pakati pemumiriri weRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika, VaDonald Trump nevari kumirira Democratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika, VaJoe Biden.
Gakava pakati paVaTrump naVaBiden rakashoropodzwa nevakawanda vachiti vaviri ava vakanga vasingapane mukana wekutaura.
Gakava raVaPence naAmai Harris riri kuuyawo panguva iyo mutungamiri weAmerica pamwe nevamwe vevavanoshanda navo vakabatwa vaine chirwere cheCovid-19.
Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti havaoni kurwara kwaVaTrump kuchipa mukana wakanyanya kuna Senator Harris pamberi paVaPence, vachiti VaPence munhu ave neruzivo rwakadzama mubasa rake.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, VaTamburai Gwekerere, vanoti vakatarisira dhibheti iri zvakanyanya kuti vanzwe pfungwa dzevaviri ava.
Hurukuro naVaTamburai Gwekwerere